April 2022 - Achawlaymyar
30/04/2022 မှ ၂၄နာရီအတွင်း မိုးတွေရှယ်ဝုန်းပြီး မိုးကြီးနိုင်တဲ့ ဒေသမျာ
April 30, 2022 by Achawlaymyar
” စိတ် “ချမ်းသာစေမည့် နည်းလမ်း ( ၁၀ )ချက်
စိတ် ချမ်း သာ အောင် နေ နည်း ( ၁ ) သူ များ ပြော တိုင်း လိုက် ပြီး မ ခံ စား နဲ့ ။ ( ပိန် တယ် ၊ ဝ တယ် ၊ ပု တယ် ၊ ရှည် တယ် ၊ ဖြူ တယ် ၊ မဲ တယ် ၊ နှိမ် တယ် ၊ ကဲ့ ရဲ့ တယ် စ သည် ဖြင့် ) ( ၂ ) ပြီး ခဲ့ တဲ့ … Read more
ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ပုဂံကေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာနဲ႔႐ုပ္တုမ်ိဳးစုံ ခိုးယူသူေတြဖမ္းဆီးရမိ
ပုဂံဘုရားခိုးသူေတြ ဖမ္းမိၿပီး ႐ုပ္တုေတြ ျပန္လည္ရရွိ ဧၿပီ ၂၉-၂၀၂၂ ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ပုဂံေဒသက ဘုရားအမွတ္ ၄၁၈ နဲ႔ ဘုရားအမွတ္ ၇၁၆ ဘုရားေတြဆီကေန ျဖဳတ္ယူအခိုးခံလိုက္ရတဲ့ ႐ုပ္တုေတြနဲေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သလို ခိုးယူသူေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိထားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ဌာနခြဲကေန သိရပါတယ္။ ဘုရားအမွတ္ ၄၁၈ မွ ဦးေခါင္းသုံးလုံးပါ ျဗဟၼာ႐ုပ္တု ၄ ခု ၊ဘုရားအမွတ္ – ၇၁၆ မွျခေသၤ့႐ုပ္တု ၄ခု ၊ ဗုံတီးဟန္႐ုပ္တု ၂ ခု (ဦးေခါင္းနဲ႔အပိုင္းအစအခ်ိဳ႕ ပဲ့)၊ ပလႅင္ထမ္းဟန္ ႐ုပ္တု ၁ ခု၊ကေခ်သည္႐ုပ္တု ၁ ခု၊ အုတ္ခြက္စာပါအုတ္ ၁၉ ခ်ပ္ ၊၂ ေပပတ္လည္ ေက်ာက္ျပားမွာ သမင္႐ုပ္ပုံပါ ၁ ခ်ပ္ကို … Read more
“လူတွေ သိပ်မသိသေးတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ “အိမ်သာ” သမိုင်းကြောင်း”
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ နန်းတွင်းပြင်ပက ပြည်သူတွေ ရဲ့ လူမှုဘ၀ကို မှတ်တမ်းတင်တာ အင်မတန်ရှားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နေ့စဉ်ဘ၀မှာ မပြုလုပ်မဖြစ်တဲ့ အိမ်သာနဲ့ ပတ်သက်လို့ပေါ့။ ရှေးလူတွေ ဘယ်လိုအိမ်သာတက်ကြလဲ။ အိမ်သာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာ့သမိုင်းထဲ အစောဆုံးအထောက်အထားကတော့ အေဒီ ၁၁၆၇ ပုဂံမှာ နန်းတက်ခဲ့တဲ့ နရသူမင်းလက်ထက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ အိမ်သာတက်တဲ့အခါ ရေမသုံးတဲ့ နရသူမင်းကို ပဋိက္ခရားမင်းသမီးက အနားကပ်မခံတဲ့အတွက် ဘုရင်က စီရင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားပါ။ အဲ့ဒီ အုံးမကီးမင်းတရားကို အကြောင်းပြုလို့ ပုဂံခေတ် အေဒီ ၁၂ ရာစုမှာ နန်းတော်တွင်း အိမ်သာရှိနေပြီ။ ရေသုံးပြီး သန့်စင်မှုပြုနေပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။ အိမ်သာသုံးစက္ကူအသုံးပြုမှုကတော့ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း လက်ထက်မှာ နန်းတွင်းမှာ စသုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရှင်ဘုရင်တွေရဲ့ တနေ့တာ အချိန်ဇယားမှာ နံနက် အိပ်ရာထချိန် … Read more
29.4.2022 မုံရွာ – မြင်းမူ – မန္တလေး လမ်းပိုင်း၊ထီးဆောင်း-အရာတော်လမ်းနှင့် မြင်းမူမြို့နယ်အတွင်းရှိလမ်းပိုင်းများ မြို့နယ်ချင်းဆက် လမ်းပိုင်းများအား ခုချိန်မှ စတင်ပြီးလုံးဝ(လုံးဝ) အသုံးပြုခြင်း မပြုကြရန် ပြည်သူလူထုအား အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ May be an image of map and text that says ‘egyi Mvinmu မြင်းမူ Irrawa Tizaung Inma Inma Garu Mi ywa Byainggyaing Aungchan atkon Kyunbobin Ayadaw အရာ တေ’ မုံရွာ – မြင်းမူ – မန္တလေး လမ်းပိုင်း၊ထီးဆောင်း-အရာတော်လမ်းနှင့် မြင်းမူမြို့နယ်အတွင်းရှိလမ်းပိုင်းများ မြို့နယ်ချင်းဆက် လမ်းပိုင်းများအား ခုချိန်မှ စတင်ပြီးလုံးဝ(လုံးဝ) … Read more
ကားသူခိုးေတြကို လွည့္စားဖို႔ ဝယ္ထားတဲ့ကားအသစ္ႀကီးကို….
လူတွေဟာ ကားသူခိုးတွေကို လှည့်စားဖို့ သူတို့ရဲ့ကားကိုသံချေးနဲ့ဖုံးအုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အထိ လုပ်ရဲကြတယ်ဆိုတော့ တော်ယုံတန်ယုံစကေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကားပိုင်ရှင်လိုပေါ့။ ဒီ Volkswagen T5 Sportline ကားပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဟာ ကားသူခိုးတွေထံမှ ကာကွယ်ဖို့ သူ့ရဲ့ Van ကားအသစ်ကို သံချေးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။Clyde Wraps အမည်ရှိ UK အခြေစိုက်ဗီနိုင်းဆွဲတဲ့ဆိုင်ရဲ့အကူအညီဖြင့် ကားရာဇဝင်သားတွေရဲ့ခိုးယူခြင်းမှကာကွယ်ဖို့ သူ့ရဲ့ကားတစ်စီးလုံးကို သံချေး၊ အက်ကြောင်း၊ခြစ်ရာတွေ နဲ့ ကားတံခါးပေါက်တွေအဆုံး စုတ်ပြတ်ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ “သူ့ရဲ့ Van ကားက လူအုပ်ထဲမှ ာထင်ရှားနေခဲ့တာကြောင့် သံချေးတွေနဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို မေးမြန်းဖို့ ရဲ က သူ့ကို ၃ ရက်လောက်ခေါ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်က အရမ်းပျော်နေခဲ့တယ်”လို့ Clyde Wrapsဆိုင်က သူတို့ဝက်ဆိုက်မှာ ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်သူတွေက Disneyရဲ့ Cars ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့Rusty … Read more
ခင္ပြန္းျဖစ္သူက သူမအေပၚလိမ္လည္ခဲ့လို႔ ေဒါသထြက္ၿပီး….
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမအပေါ်လိမ်လည်ခဲ့လို့ ဒေါသထွက်ပြီး သူတို့အတူစုဆောင်းထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကိုမျိုချခဲ့တဲ့ ဇနီးသည် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက ၂၈ နှစ်အရွယ် Sandra Milena Almeida အမည်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းသည်က သူမကိုလိမ်ညာနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့သစ္စာမဲ့မှုအပေါ် ဒေါသထွက်ကာ ဇနီးသည်က သူတို့အတူစုဆောင်းထားတဲ့ငွေအားလုံးကိုမျိုးချပြီး ကောင်လေးနဲ့ကွာရှင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။ သူမဟာ ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကို မျိုချခဲ့လိုက်တာပါ ။ သူမခင်ပွန်းထွက်ခွာသွားပြီးနောက်သူမပြိုကျခဲ့ပြီး ပြင်းထန်တဲ့အစာအိမ်နာကျင်မှုအတွက် ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ် ။ Almeida က သူမဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဆရာဝန်တွေကို မပြောခဲ့ပါဘူး ။ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေက သူမကို x-ray မှာ packetsအသေးလေးတွေတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာ သူမဟာ တရားမဝင်တဲ့အထုပ်ကို မျိုချခဲ့တဲ့မူးယစ်ရာဇာတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့ ပထမဆုံးမှာ ထင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူမဟာ … Read more
စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ရမည္ဆိုၿပီး ပြဲစားကေနတဆင့္ ရန္ကုန္ ေရာက္လာတဲ့ မိန္းကေလးရဲ႕ အျဖစ္
စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ရမည်ဆိုပြီး ပွဲစားကနေတဆင့် ရန်ကုန် ရောက်လာတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ် စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ရမည်ဆိုပြီး ပွဲစားကနေတဆင့် ရန်ကုန် ရောက်လာတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်နှင့် ကယားပြည်နယ်က စစ်ဘေးရှောင် မိန်းကလေးတွေကို Target ထားလာတဲ့ အေးဂျင့် လူလိမ်များ.. အမည်က နာတာရှာ၊ အသက်က ၁၈ နှစ်၊ နေရပ်က ဒေါငံခါး ၃ ရပ်ကွက်ကပါ။ စင်ကာပူသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ရမည်ဟု အသိတစ်ယောက်၏ မိတ်ဆက်ပေးမှုဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ၂၀ ရက်နေ့ထွက်ခွာခဲ့ပြီး လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒိုတစ်ခုသို့ ညအချိန်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခန်းတခုထဲတွင် အခြားသော မိန်းကလေး အယောက် ၃၀ နှင့်အတူ တံခါးသော့အထပ်ထပ် ခတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်။ အင်တာဗျူးဖြေလို့မှားရင် ကျောနှင့် ခြေထောက်များကို တုတ်နှင့်ရိုက်ပါတယ်။ ကွန်ဒို ၆ လွှာတွင် … Read more